आज २०७७ भदौ २२ गते सोमबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस – Rapti Khabar
आज २०७७ भदौ २२ गते सोमबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस
आज २०७७ भदौ २२ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
कतै लामो दूरीको लाभदायी यात्रा गर्नु छ भने आज राम्रो हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ । विश्वासपात्रबाट धोका हुन सक्छ, सजग रहनुहोला। निर्णय लिएर पनि शंका गर्ने बानीले पछि परिनेछ। परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दु:ख पाइनेछ । महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्‍याउन सक्छन्। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइने सम्भावना छ। मान्यजनको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला।
मलेसियाका तीन ठुला कम्पनीले किन फिर्ता गर्दैछन् श्रमिकले मलेसिया आउन तिरेको रकम ? हेर्नुस
असोज, काठमाडौँ । मलेसियाका तीनवटा कम्पनीहरु टप ग्लोव, हार्टालेगा र कोसानले आफ्नो कम्पनीमा रोजगारीका लागि आउने आप्रवासी श्रमिकलाई कुनैपनि प्रकारको शोषणमा पर्न नदिन आफूहरु सजग रहेको र सोही अनुरुपको पूर्वसतर्कता अपनाइएको बताएका छन् । पछिल्लो समयमा यी तीनवटै कम्पनीहरुले आप्रवासी श्रमिकको भर्नामा शुन्य लागतको नीति अवलम्वन गरिएको बताउँदै आएका छन् । शुन्य लागतको अर्थ कुनै […]
आज २०७७ भदौ ११ गते बिहीबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस
Posted on August 27, 2020 Author Rapti Khabar
आज २०७७ भदौ ११ गते बिहीबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। […]
दही खाँदा कसलाई फाइदा, कसलाई बेफाइदा ? थाहा पाउनुस
आज यी प्रदेशमा हुन्छ भारी बर्षा